အခုလိုခက်​ခဲ​​နေကြ​သော ကိုဗစ်ကာလမှာပေါ်​ပေါက်​လာခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကမြေအောက်လောကတစ်ခုအ​ကြောင်း – Maythadin
အခုလိုခက်​ခဲ​​နေကြ​သော ကိုဗစ်ကာလမှာပေါ်​ပေါက်​လာခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကမြေအောက်လောကတစ်ခုအ​ကြောင်း
ရန်ကုန်မြို့ ကကြိုးရယ်စုံပါပေ့ မနက်က လိုတာလေး ဝယ်ရအောင် ဈေးဖက်ထွက်ခဲ့တယ်။ ညက လိုက်အော်ထားလို့နဲ့တူပါရဲ့ လမ်းဘေးဈေးသည် တစ်သည်မှမရှိ။ လမ်းထိပ်ရောက်တော့ ကျနော့ ရှေ့ကသွားနေတဲ့လူက မလုံမလဲနဲ့ ဘေးဘီကြည့်ရင်း လမ်းထောင့်မှာ
ရပ်နေတဲ့ အိန္ဒိယသားတစ်ယောက် နားကပ်သွားပြီး တိုးတိုး တိုးတိုးပြောတယ်။ ပြီးတော့(ပိုက်ဆံလို့ ထင်တာဘဲ) ကပ်ပေးလိုက်တယ်။ အိန္ဒိယသား(မုတ်ဆိတ်နဲ့)က ဖုန်းထုတ်ပြီးဆက်တယ် သူ့ကိုလည်း ခဏစောင့်ဖို့ ခြေဟန်လက်ဟန်နဲ့ပြတယ်။ ဟား ဟ
ဒါသေချာတယ် ကိုယ်လည်း ရန်ကုန်မှာမွေးတဲ့သူဘဲ ပေါက်တာပေါ့။ ဒီလို အထာမျိုးတွေကို ကိုယ်ကလည်း ဒါမျိုးဆို သိပ်သိချင်တဲ့ ကောင်။ ဖုန်းလာသလိုလို ပြောသလိုလိုနဲ့ မယောင်မလည်ရပ်လိုက်ရင်း အခြေအနေကို အကဲခတ်နေလိုက်တယ်။ ရွှီ ကနဲ လေချွန်သံ
တစ်ချက်အပြီးမှာ နောက်က တိုက်သုံးထပ်ပေါ်က အထုတ်လေးတစ်ထုတ် ကျလာတယ်။ မုတ်ဆိတ်က လှမ်းဖမ်းလိုက်ပြီး ခုနက လူကိုပေးတယ်။ ဟိုလူကရတာနဲ့ ချာကနဲ လှည့်လစ်သွားတယ်။ ဟား လုပ်လှချည့်လား ကိုယ့်အပိုင်ထဲမှာတောင် ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေပါ့လား
ဟ ဟ ဟ။ ငါသိတယ်နော် ဆိုတဲ့အထာနဲ့ မုတ်ဆိတ်ကို ရှိုးလိုက်တယ်။ အိန္ဒိယသားကလည်း နပ်တယ် ကျနော့ကို လှမ်းပြုံးပြတယ်။ ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခု ရေးထားတဲ့ ကတ်ပြားလေးတစ်ခု လှမ်းပေးရင်း တီးတိုးမေးတယ်။ အကိုလိုရင် လှမ်းမှာလို့ရအောင် အခုရော
ယူသွားဦးမှာလား? အခုချက်ခြင်း ရမှာလား? ကြာမှာလား? အဲ့မုတ်ဆိတ် ကပ်ပြောတယ် ၅ မိနစ်လောက်ပါဘဲအကို အပေါ်ထပ်မှာ ဆက်တိုက် ယာနေပါတယ်။ အကိုက ဘာနဲ့စားမှာလဲ နိုင်တီတူးနဲ့လား ဘုရင်မနဲ့လား ဘယ်လောက်ဖိုးလဲ တဲ့ (၅၂၈).
ရနျကုနျမွို့ ကကွိုးရယျစုံပါပေ့ မနကျက လိုတာလေး ဝယျရအောငျ ဈေးဖကျထှကျခဲ့တယျ။ ညက လိုကျအျောထားလို့နဲ့တူပါရဲ့ လမျးဘေးဈေးသညျ တဈသညျမှမရှိ။ လမျးထိပျရောကျတော့ ကနြော့ ရှကေ့သှားနတေဲ့လူက မလုံမလဲနဲ့ ဘေးဘီကွညျ့ရငျး လမျးထောငျ့မှာ
ရပျနတေဲ့ အိန်ဒိယသားတဈယောကျ နားကပျသှားပွီး တိုးတိုး တိုးတိုးပွောတယျ။ ပွီးတော့(ပိုကျဆံလို့ ထငျတာဘဲ) ကပျပေးလိုကျတယျ။ အိန်ဒိယသား(မုတျဆိတျနဲ့)က ဖုနျးထုတျပွီးဆကျတယျ သူ့ကိုလညျး ခဏစောငျ့ဖို့ ခွဟေနျလကျဟနျနဲ့ပွတယျ။ ဟား ဟ
ဒါသခြောတယျ ကိုယျလညျး ရနျကုနျမှာမှေးတဲ့သူဘဲ ပေါကျတာပေါ့။ ဒီလို အထာမြိုးတှကေို ကိုယျကလညျး ဒါမြိုးဆို သိပျသိခငျြတဲ့ ကောငျ။ ဖုနျးလာသလိုလို ပွောသလိုလိုနဲ့ မယောငျမလညျရပျလိုကျရငျး အခွအေနကေို အကဲခတျနလေိုကျတယျ။ ရှီ ကနဲ လခြှေနျသံ
တဈခကျြအပွီးမှာ နောကျက တိုကျသုံးထပျပျေါက အထုတျလေးတဈထုတျ ကလြာတယျ။ မုတျဆိတျက လှမျးဖမျးလိုကျပွီး ခုနက လူကိုပေးတယျ။ ဟိုလူကရတာနဲ့ ခြာကနဲ လှညျ့လဈသှားတယျ။ ဟား လုပျလှခညျြ့လား ကိုယျ့အပိုငျထဲမှာတောငျ ဒါမြိုးတှဖွေဈနပေါ့လား
ဟ ဟ ဟ။ ငါသိတယျနျော ဆိုတဲ့အထာနဲ့ မုတျဆိတျကို ရှိုးလိုကျတယျ။ အိန်ဒိယသားကလညျး နပျတယျ ကနြော့ကို လှမျးပွုံးပွတယျ။ ဖုနျးနံပါတျတဈခု ရေးထားတဲ့ ကတျပွားလေးတဈခု လှမျးပေးရငျး တီးတိုးမေးတယျ။ အကိုလိုရငျ လှမျးမှာလို့ရအောငျ အခုရော
ယူသှားဦးမှာလား? အခုခကျြခွငျး ရမှာလား? ကွာမှာလား? အဲ့မုတျဆိတျ ကပျပွောတယျ ၅ မိနဈလောကျပါဘဲအကို အပျေါထပျမှာ ဆကျတိုကျ ယာနပေါတယျ။ အကိုက ဘာနဲ့စားမှာလဲ နိုငျတီတူးနဲ့လား ဘုရငျမနဲ့လား ဘယျလောကျဖိုးလဲ တဲ့ (၅၂၈).
နွားထိုးကြီးမြို့က ရဲတပ်ဖွဲ့ ၂၀၂၀ အထူးရဲသင်တန်းမှာ Swab ယူ​​နေတဲ့ဆရာဝန်ပါအော်ရယ်ခဲ့မိတဲ့အဖြစ် (ရုပ်သံ)
ရောဂါကာလအတွင်းမှာ သားဖြစ်သူအားအပြင်​မထွက်​ရဲ​အောင်​ ထိပ်ပြောင်ဆံပင်ပုံစံညှပ်ပေးပြီး ထိန်းချုပ်ထား​သော ဖခင်တစ်​ဦး
လူပျိုဟန်​​ဆောင်​ကာ လိမ်ညာလက်ထပ်ခဲ့သူကိုယုံမိခဲ့လို့အကြွေး သိန်းဆယ်​ချီနဲ့အတူဗိုက်တစ်လုံးပါကျန်ခဲ့ရတဲ့ အမျိူးသမီးရဲ့အဖြစ်